Mampidi-Doza ny Demaokrasia ao Ekoatera ny Fifanenjanana eo amin’ny Governemanta sy ny Mpanohitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jolay 2015 7:07 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, বাংলা, Español
Olom-pirenena Ekoaterianamitana sora-baventy maneso ny filoha Correa amin'ny teny anglisy hoe: “Mba hahatakaranao azy, dia holazaiko amin'ny teny anglisinao hoe…'We don't like you. Get out’ [tsy tia anao izahay.Mialà tany]”. Saripikan'ny mpisera Twitter @beadomenech95
Na dia eo aza ny fandokafana azon'i Ekoatera amin'ny fampihenana ny fahantranay tao anatin'ny taona faramparany dia miatrika fanamby ity firenena Amerikana Tatsimo ity hahafeno ny tetibola ara-ketra vokatry ny lavaka [fidinana] eo amin'ny vidin'ny vokatra fanondrany betsaka indrindra eo amin'ny sehatra manerantany dia ny solika izany.
Raha mifampitolona eo amin'ny sehatra ara-bola ny politisiana, dia nisy hetsika niainga avy amin'ny internety nankeny an-dalambe notontosaina tamin'ny tanàndehibe maro tao amin'ny firenena.
Ireo hetsi-panoherana ireo dia ho setrin'ny lalàna izaràna indray ny harena azo izay ametrahana haba vaovao eo amin'ny lova na renivola azo. Vao nahemotry filoha Rafael Correa [ny fampiharana] ity lalàna ity hifaranan'ny diabe sy hametrahana rivotra “mahafinaritra sy milamina” amin'ny fahatongavan'ny Papa Fransoà, izay ho tonga ao an-drenivohitra Quito amin'ny Alahady.
Na izany aza dia mbola mitohy manerana ny tenàna maro ao Ekoatera ny hetsi-panoherana malefaka kokoa sy ny tohitra fanoherana, indrindra fa izay tarihan'ny Ben'ny tanànan'i Guayaquil (tanàna faharoa lehibe indrindra), Jaime Nebot, ary Paul Carrasco, prefen'ny faritanin'i Azuay.
Ao amin'ny lahatsorany hoan'ny GKillCity mitondra ny lohateny hoe, ‘Inona no hitranga raha mahomby ny #FueraCorreaFuera (#MialaCorreaMiala) ?’, no amelabelaran'i analyst Matthew Carpenter-Arévalo (Teraka Kanadiana, saingy Ekoateriana ara-panahy), mpanadihady, fandresen-dahatra fa tafiditra ao anatin'ny tolona heverina ho toy ny tsy natao ny Ekoateriana an-tapitrisany :
Mbola ampandavahana ny hatsana mampisaraka ny olom-pirenena ny governemanta amin'izao fotoana fa ny fahafahany mitoetra eo amin'ny fahefana dia tsy miankina amin'ny fifampiresahana malalaka amin'ireo sokajin'olona isan-karazany misy ao amin'ny fiarahamonina, fa eo amin'ny fahafahany mampiseho ny herim-pitolomany mandavo ny hafa. Raha mbola manohy ny fanonganam-panjakana isika dia tsy hisy ny fanamafisana ny andrim-panjakana, rehefa hidika fampandemena sy famparefoana fitazonana maharitra ny fahefana ny famoizana ny fifehezana ny andrim-panjakana. Tsy ho tonga ihany koa noho ny tsy mety ifaranan'ny fahamarinan-toerana ara-politika ny fampiasam-bola vahiny — izay ilaintsika indrindra hampivelarana ny indostria anatiny.
Raha ny momba ny fitondran'i Correa indray dia izao no soratany: “Olona na antoko politika mipetraka eo amin'ny fitondrana tsy manontany ny vahoaka ka mampidi-doza ny lamina demaokratika. Na izany aza dia tsy manamarina hanaovana fanonganam-panjakana ho solon'ny safidim-bahoaka izany.”
Ampahatsiahiviny ho an'ny Ekoateriana ihany koa fa ny demaokrasia dia tsy midika hoe manolo vondrona tsy demaokratika iray amin'ny vondrona tsy demaokratika hafa:
Rehefa miteny ny filoham-pirenena fa ny fanoherana ‘tsara tarigetra’ — izay araka ny famaritany azy — ihany no ifampiresahany ary rehefa miteny ihany koa ny mpanao gazety teo aloha sady kandidà Carlos Vera fa “tsy iadian-kevitra ny jadona fa iadiana”, dia samy mampiseho kolontsaina tsy demaokratika izy roa ireo noho ny tsy fahafahana mametraka fifampiresahana noho ny fanintsanana avy hatrany ny mpifanandrina aminy. Aoamin'ny kolontsaina demaokratika ny fifampiresahana dia varavarambe tsy azon'ny na iza na iza akatona. Tsy ambinambin'ny demaokrasia izany fa io mihitsy no votoatiny manankasina.